राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाई सिट सहजै जित्ने एमाले माओवादी कार्यदलको निस्कर्ष
Sunday, 14 Jan, 2018 6:39 PM
३० पुस, काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्रद्वारा गठित कार्यदलले ३ दिनभित्र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँडलाई टुंग्याउने तयारी गरेको छ । कार्यदलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कम्तिमा पनि ३८ सिट जित्ने निस्कर्ष निकालेको छ ।
एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा कुन प्रदेशमा कति सिट जित्न सकिन्छ भनेर कार्यदलमा छलफल भएको थियो । जसअनुसार प्रदेश नं. मा आठै सिट जित्न सकिने विश्लेषण कार्यदलले गरेको छ भने प्रदेश नं. २ मा मधेशवादी दलहरुसँग मिल्न सकिने सम्भावना रहेको निस्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यल बैठकले बुधबारसम्म राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको सिट बाँडफाँड टुंगोमा पु-याउने गरी छलफललाई अघि बढाएको छ । एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकमा दुई वटै दलका नेताहरुले निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई आधार बनाएर आफ्ना आफ्ना प्रस्ताव पेश गरेका थिए । बैठकमा माओवादीले दुई मुख्यमन्त्री र चार प्रदेशमा सभामुख माग गरेको बताइएको छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँड दुवै दलका अध्यक्षहरुसँग परामर्श गरी बुधबार टुंग्याउने गरी छलफल अघि बढाइएको कार्य दलका संयोजक एमाले नेता सुवास नेम्बाङले जानकारी दिए ।
माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँड बुधबारसम्म टुंगोमा पु-याउने सहमति गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहा“ले प्रदेश सरकार गठनका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको बताए ।
बाम गठबन्धनमा आवद्ध दुई दलले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँड र प्रदेश सरकार गठनका लागि गृहकार्य गर्न एमाले नेता नेम्बाङ र माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा बादल रहेको ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।